News - Ngwa nke ANSY oke oke njikarịcha na puru omume Design on Ultrasonic Welding mpi
Site na mmepe nke teknụzụ ultrasonic, ngwa ya na-abawanye ụba, enwere ike iji ya hichaa obere unyi, yana enwere ike iji ya maka ịgbado ọkụ igwe ma ọ bụ plastik. Karịsịa na ngwaahịa plastik taa, a na-ejikọkarị ịgbado ọkụ ultrasonic, n'ihi na ewepụla usoro ịghasa, ọdịdị nwere ike izu oke, yana ọrụ nke igbochi mmiri na uzuzu na-enyekwa. Nhazi nke mpi plastik plastik nwere mmetụta dị mkpa na njedebe ịgbado ọkụ ikpeazụ na ikike mmepụta. Na mmepụta nke mita eletrik ọhụrụ, a na-eji ebili mmiri ultrasonic jikọta ihu elu na nke ala ọnụ. Agbanyeghị, n'oge eji eme ihe, achọpụtara na ụfọdụ ngwaọrụ arụnyere na igwe ma gbawaa na ọdịda ndị ọzọ na-eme n'oge dị mkpirikpi. Fọdụ ngwaahịa ịgbado ọkụ ngwaahịa Ngwaọrụ ntụpọ dị elu. Mmetụta dị iche iche enweela nnukwu mmetụta na mmepụta. Dabere na nghọta, ndị na-ebubata ngwa ọrụ nwere ikike amachaghị maka ngwa ọrụ, yana ọtụtụ oge site na nrụzigharị ugboro ugboro iji nweta ihe ngosi nhazi. Yabụ, ọ dị mkpa iji uru nke aka anyị wee mepụta ngwa ọrụ na-adịgide adịgide na usoro imepụta ihe.
2 Ultrasonic plastic ịgbado ọkụ ụkpụrụ
Ultrasonic plastic ịgbado ọkụ bụ usoro nhazi nke na-eji nchikota nke thermoplastics dị na ugboro ugboro na-amanye vibration, na ebe ndị na-ekpo ọkụ na-ehichapụ ibe ha iji mepụta agbaze okpomọkụ dị na mpaghara. Iji mezuo ezigbo nsonaazụ ultrasonic, akụrụngwa, akụrụngwa na usoro nhazi chọrọ. Ihe na-esonụ bụ mkpirikpi iwebata ụkpụrụ ya.
2.1 Ultrasonic plastic ịgbado ọkụ usoro
Onu ogugu 1 bu ihe nlere anya nke usoro ntanye. A na-agafe ike eletrik site na ihe mgbaàmà mgbaàmà na ampilifaya ike iji mepụta akara eletriki ọzọ nke oge ultrasonic (> 20 kHz) nke etinyere na transducer (piezoelectric seramiiki). Site na transducer, eletriki ike na-aghọ ume nke n'ibu vibration, na njupụta nke n'ibu vibration na-gbanwee site na mpi na ihe kwesịrị ekwesị na-arụ ọrụ njupụta, na mgbe ahụ uniformly ebute site ná ihe na kọntaktị na ya site na ngwá ọrụ isi (ịgbado ọkụ) )). A na-etinye ihu kọntaktị nke ihe abụọ a na-ekpo ọkụ ọkụ na-amanyekwa ya elu, na esemokwu esemokwu na-eme ka agbaze ọkụ dị elu nke mpaghara. Mgbe obi jụrụ, a na-ejikọta ihe ndị ahụ iji nweta ịgbado ọkụ.
N'ime usoro ịgbado ọkụ, isi iyi mgbaàmà bụ akụkụ okirikiri nke nwere elekere ampilifaya nke ike nkwụsi ike ya na ịnya ike na-emetụta arụmọrụ nke igwe ahụ. Ihe a bu ihe anakpo thermoplastic, ya na imeputa elu nke nkwonkwo kwesiri itughari uzo esi eweputa oku na ulo. A na-ahụta ndị ntụgharị, mpi na isi ngwa ọrụ dịka ihe eji arụ ọrụ maka nyocha dị mfe nke njikọta nke vibrations ha. Na plastic ịgbado ọkụ, n'ibu vibration na-ebute site n'ụdị longitudinal ebili mmiri. Etu esi ebufe ike ma gbanwee njupụta bụ isi ihe eji emepụta.
2.2 Isi ngwá ọrụ (ịgbado ọkụ tooling)
Isi ihe eji eme ihe dị ka kọntaktị kọntaktị n'etiti ultrasonic ịgbado ọkụ igwe na ihe onwunwe. Isi ọrụ ya bụ iji zipu ihe ntanetị na-arụpụta ogologo oge nke onye na-eme mgbanwe dị iche iche rụọ ọrụ nke ọma. Ihe eji eme ihe na-abụkarị ezigbo alloy alloy ma ọ bụ ọbụna titanium alloy. N'ihi na nhazi nke ihe plastik na-agbanwe nke ukwuu, ọdịdị ahụ dị nnọọ iche, na isi ngwá ọrụ ga-agbanwe ya. Shapedị elu nke ịrụ ọrụ kwesịrị ijikọta ya na ihe ahụ, ka ọ ghara imebi plastik mgbe ọ na-ama jijiji; n'otu oge ahụ, usoro izizi ogologo oge nke ogologo oge ga-achikọta ya na ọnụọgụ nke igwe ịgbado ọkụ, ma ọ bụghị na ike vibration ga-eri ya n'ime. Mgbe isi akụrụngwa mara jijiji, nrụgide nrụgide mpaghara na-apụta. Otu esi emezi ihe owuwu ndi a bu ihe omuma. Isiokwu a na-enyocha otu esi etinye isi ANSYS imewe ihe eji eme ka ihe kacha mma iji mepụta nhazi na imepụta nnabata.
3 ịgbado ọkụ tooling imewe
Dịka e kwuru na mbụ, nhazi nke ịgbado ọkụ dị ezigbo mkpa. E nwere ọtụtụ ndị na-eweta ngwa ọrụ ultrasonic na China na-ewepụta ngwaọrụ ha ịgbado ọkụ, mana akụkụ buru ibu n'ime ha bụ nitomi, mgbe ahụ ha na-egbutu ma na-anwale. Site na usoro mgbanwe a ugboro ugboro, a na-enweta nhazi nke ngwa ọrụ na akụrụngwa ugboro. N'akwụkwọ a, enwere ike iji usoro mmewere iji chọpụta ọnụọgụ mgbe ị na-ahazi ngwa ọrụ ahụ. Nsonaazụ nyocha ngwa ọrụ na njehie imepụta ihe bụ naanị 1%. N'otu oge ahụ, akwụkwọ a na-ewebata echiche nke DFSS (Design For Six Sigma) iji bulie ma sie ike nhazi nke ngwa ọrụ. Ebumnuche nke atụmatụ 6-Sigma bụ ịnakọta olu ndị ahịa n'ụzọ zuru ezu na usoro nhazi maka imewe ezubere iche; na ịtụle ihe ndị nwere ike ime na usoro mmepụta iji hụ na ekesara ogo ngwaahịa ikpeazụ n'ime ọkwa dị mma. E gosipụtara usoro nhazi ahụ na Ọgụgụ 2. Malite site na mmepe nke ihe ngosi nhazi, nhazi na akụkụ nke akụrụngwa na-ebu ụzọ mepụta dịka ahụmịhe dị. Ejiri usoro iheomume mee ihe na ANSYS, wee kpebie ihe nlere ahụ site na nnwale nnwale nnwale (DOE). Ihe dị mkpa, dị ka ihe siri ike chọrọ, chọpụta uru ọ bara, wee jiri usoro obere nsogbu iji bulite akụkụ ndị ọzọ. N'iburu n'uche mmetụta nke ihe na gburugburu ebe obibi n'oge imepụta na ojiji nke akụrụngwa, a haziri ya na nnabata iji gboo mkpa nke imepụta ihe. N'ikpeazụ, ịmepụta, ule na nyocha usoro nyocha na njehie n'ezie, iji zute ndị na-egosi ihe eji emepụta ihe. Ndị na-esonụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ zuru ezu iwebata.
3.1 ometdị ọdịdị ọdịdị geometric (ịtọ ntọala nlereanya)
Mepụta ngwá ọrụ ịgbado ọkụ na-ebu ụzọ chọpụta ọdịdị na ọdịdị ọdịdị geometric ya ma guzobe usoro iheomume maka nyocha na-esote. Ọgụgụ 3 a) bụ nhazi nke mgbatị kachasị arụ ọrụ, nke a na-emepe ọtụtụ nke grooves nke U na-eduzi n'ụzọ nke ịma jijiji na ngwongwo nke ihe dịka cuboid. The ngụkọta akụkụ bụ ogologo nke X, Y, na Z ntụziaka, na mpụta akụkụ X na Y bụ n'ozuzu tụnyere ndị size nke workpiece na-ịgbado ọkụ. Ogologo nke Z dị ka ọkara ntụgharị nke ebili mmiri nke ultrasonic, n'ihi na na nkuzi nke oge gboo, usoro izizi mbụ nke ihe elongated kpebisiri ike site n'ogologo ya, ọkara ọkara-ogologo ahụ kwekọrọ na nke acoustic. oge ebili mmiri. A gbatịwo imewe a. Jiri, bara uru maka mgbasa nke ebili mmiri. Ebumnuche nke uzo U bụ iji belata ọnwụ nke mpụta vibration nke ngwaọrụ. A na-ekpebi ọnọdụ, nha na ọnụ ọgụgụ dabere na mkpokọta ngwa ọrụ ahụ. Enwere ike ịhụ na na imewe a, enwere obere ọnụọgụ enwere ike ịhazi ya kpamkpam, yabụ anyị emeela mgbanwe na ndabere a. Onyonyo 3 b) bu ​​ngwa oru ohuru emere ohuru nke nwere otutu onu ogugu karia ihe eji eme omenala: arc di elu R. Na mgbakwunye, edeputara uzo na elu oru nke ngwa oru iji kwado onu oru plastic, nke bụ uru na-ebunye vibration ume ma na-echebe ndị workpiece si mebiri. Ihe nlere a ka eji eme ihe na ANSYS, ma emesia ihe omuma nke ozo.
3.2 Mee nnwale nnwale (mkpebi nke ihe ndị dị mkpa)
Emepụtara DFSS iji dozie nsogbu injinia bara uru. Ọ naghị agbaso izu oke, mana ọ dị irè ma sie ike. Ọ na-egosipụta echiche nke 6-Sigma, weghara esemokwu dị ukwuu, wee hapụ "99.97%", ebe ọ na-achọ ka atụmatụ ahụ bụrụ ihe na-eguzogide ọgwụ na mgbanwe gburugburu ebe obibi. Ya mere, tupu ịme njirisi ihe elebara anya, ọ ga-ebu ụzọ kpuchie ya, ma a ga-ahọpụta nha nwere mmetụta dị mkpa na usoro ahụ, a ga-ekpebikwa ụkpụrụ ha dị ka ụkpụrụ siri ike.
3.2.1 Mee oke ntọala na DOE
Nhazi ihe eji eme ihe bu ihe eji eme ihe na onodu uzo nke uzo U, wdg. Ebumnuche ebumnuche bụ usoro izizi axial vibration nke mbụ n'ihi na ọ nwere mmetụta dị ukwuu na weld, yana nrụgide kachasị elu na ọdịiche dị na njupụta arụmọrụ na-ejedebe dị ka mgbanwe steeti. Dabere na ahụmịhe, a na-eche na mmetụta nke ọnụọgụ na nsonaazụ bụ akara, ya mere, a na-etinye ihe ọ bụla naanị na ọkwa abụọ, dị elu ma dị ala. Ndepụta ọnụọgụ na aha kwekọrọ bụ ndị a.
A na-eme DOE na ANSYS site na iji usoro etinyere na mbụ. N'ihi njedebe software, ihe zuru ezu DOE nwere ike iji ihe ruru 7 rụọ ọrụ, ebe ihe nlereanya ahụ nwere ntinye 8, yana nyocha ANSYS nke nsonaazụ DOE ezughi oke dị ka sọftụwia 6-sigma ọkachamara, ma enweghị ike ijikwa mkparịta ụka. Ya mere, anyị jiri APDL dee DOE loop iji gbakọọ ma wepụta nsonaazụ nke mmemme ahụ, wee tinye data ahụ na Minitab maka nyocha.
3.2.2 Nyocha nke nsonaazụ DOE
E gosipụtara nyocha DOE nke Minitab na Ọgụgụ 4 ma na-agụnye isi ihe na-emetụta ihe nyocha na nyocha mmekọrịta. A na-eji nyocha ihe na-emetụta ihe dị mkpa iji chọpụta ụdị mgbanwe mgbanwe imewe nwere mmetụta dị ukwuu na mgbanwe ahụ ebumnuche, si otú ahụ na-egosi nke dị iche iche mgbanwe dị iche iche. A na-enyochazi mmekọrịta dị n'etiti ihe ndị ahụ iji chọpụta ọkwa nke ihe ndị ahụ na iji belata ogo njikọta n'etiti mgbanwe dị iche iche. Tụlee ogo nke mgbanwe nke ihe ndị ọzọ mgbe ihe nrụpụta dị elu ma ọ bụ dị ala. Dika axiom nke onwe ha si kwuo, imewe ihe kacha mma ejighi ibe ya, ya mere họrọ ogo nke na-adighi agbanwe agbanwe.
Nsonaazụ nyocha nke ịgbado ọkụ na akwụkwọ ọrụ a bụ: akụkụ dị mkpa dị mkpa bụ radius arc na oghere oghere nke ngwaọrụ ahụ. Ọkwa nke abụọ parameters “elu”, ya bụ, na okirikiri na-ewe a ibu uru na DOE, na uzo obosara na-ewe a ibu uru. E kpebiri ụkpụrụ ndị dị mkpa na ụkpụrụ ha, wee jiri ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ iji bulie imepụta na ANSYS iji dozie ngwa ọrụ iji kwekọọ ugboro ole ọrụ nke igwe ịgbado ọkụ. Usoro njikarịcha bụ ndị a.
3.3 Ebumnuche nke ebumnuche (ngwa ọrụ)
Ntọala ntọala nke njikarịcha imepụta yiri nke DOE. Ihe dị iche bụ na ekwenyela ụkpụrụ nke ọnụọgụ abụọ dị mkpa, akụkụ atọ ndị ọzọ metụtara metụtara akụrụngwa akụrụngwa, nke a na-ahụta dị ka mkpọtụ ma enweghị ike ịmecha ya. Mpempe atọ ndị fọdụrụ nwere ike ịhazigharị bụ ọnọdụ axial nke oghere ahụ, ogologo ya na obosara ngwaọrụ ya. Ihe njikarịcha na-eji usoro mmechi subproblem na ANSYS, nke bụ usoro a na-ejikarị eme ihe na nsogbu injinia, ma ewepụ usoro a kapịrị ọnụ.
Okwesiri ighota na iji otutu oge dika ihe mgbanwe di iche choro obere oru na oru. Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ nhazi atụmatụ na ọtụtụ mgbanwe, ụdị vibration nke ngwá ọrụ ahụ dị ọtụtụ na oke mmasi. Ọ bụrụ na ejiri nsonaazụ nke modal mee ihe ozugbo, ọ na-esiri ike ịchọta usoro axial nke mbụ, n'ihi na usoro nhazi usoro nwere ike ime mgbe ọnụọgụ gbanwere, ya bụ, usoro iwu nkịtị nke kwekọrọ na ọnọdụ mbụ gbanwere. Ya mere, akwukwo a nakweere nyocha nke uzo nke mbu, ma jiri usoro uzo modal iji nweta uzo nzaghachi ugboro. Site na ịchọta ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke usoro nzaghachi oge, ọ nwere ike hụ na ụdị modal kwekọrọ. Nke a dị ezigbo mkpa na usoro njikarịcha akpaka, na-ewepụ mkpa ọ dị iji aka iji aka ya chọpụta modality.
Mgbe njikarịcha ahụ mechara, arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ngwa ọrụ nwere ike ịbịaru nso na oge elele, njehie ahụ erughị uru ndidi akọwapụtara na njikarịcha. N'oge a, a na-ekpebi ngwa ọrụ ngwa ngwa, na-esote nrụpụta nrụpụta maka imepụta ihe.
3.4 Ndidi imewe
Emechara usoro ihe owuwu zuru ezu mgbe emechara atụmatụ nhazi niile, mana maka nsogbu injinia, ọkachasị mgbe ị na-atụle ego nke imepụta oke, imepụta ihe dị mkpa. A na-ebelata ọnụahịa nke obere nkenke, mana ikike ịlele usoro nhazi chọrọ ịchọpụta mgbakọ na mwepụ maka ịgbakọ ọnụ ọgụgụ. Sistemụ Nmepụta PDS PDS na ANSYS nwere ike nyochaa mmekọrịta dị n'etiti nha nha nha nha nha nha nha anya, ma nwee ike iwepụta faịlụ ndekọ metụtara ya.
3.4.1 PDS ntọala ntọala na ngụkọta oge
Dika echiche DFSS si kwuo, ekwesiri ime nyocha nyocha na ihe di nkpa di nkpa, ma enwere ike ichota nnabata ndi ozo. Ọnọdụ dị na akwụkwọ a bụ ihe pụrụ iche, n'ihi na dịka ike ịkpụzi igwe si dị, nrụpụta nrụpụta nke usoro iheomume geometric dị obere, ma nwekwa obere mmetụta na ngwa ọrụ ikpeazụ; ebe oke nke akụrụngwa dị iche iche dị iche iche n'ihi ndị na-ebubata ya, na ọnụ ahịa nke akụrụngwa na-egosi ihe karịrị 80% nke nhazi ngwa ọrụ. Yabụ, ọ dị mkpa ịtọlite ​​oke ndidi dị mma maka akụrụngwa ihe. Njirimara ihe dị mkpa dị ebe a bụ njupụta, usoro mgbanwe na ọsọ nke mgbasa ozi ụda.
Nchịkọta ntachi obi na-eji usoro ịme ihe Monte Carlo na-enweghị usoro na ANSYS iji chọpụta usoro Latin Hypercube n'ihi na ọ nwere ike ime ka nkesa nke ihe nlele dị iche iche ma nwee ezi uche, ma nweta mmekọrịta ka mma site na obere isi. Akwụkwọ a setịpụrụ isi 30. Were ya na ekesara ikike nke ihe atọ ahụ dị ka Gauss si kwuo, buru ụzọ nye ya oke na obere ala, wee gbakọọ na ANSYS.
3.4.2 Nyocha nke nsonaazụ PDS
Site na ngụkọta nke PDS, a na-enye ụkpụrụ agbanwe agbanwe nke kwekọrọ na akara ngosi 30. Achọpụtaghị mgbanwe mgbanwe ahụ. A na-etinye nkeji ahụ ọzọ site na iji sọftụwia Minitab, ma kesaa ugboro ole ahụ dịka nkesa nkịtị. Nke a na - eme ka ndozi mgbakọ na mwepụ nke nyocha nnabata.
Ngụkọta nke PDS na-enye usoro dabara adaba site na nhazi imewe ka mmụba nke nnabata nke mgbanwe gbanwere: ebe y bụ ihe mgbanwe ahụ, x bụ mgbanwe imewe, c bụ mmekọrịta mmekọrịta, na m bụ ọnụ ọgụgụ na-agbanwe agbanwe.
Dịka nke a, enwere ike ekenye onye ọhụụ ọ bụla iji mezue ọrụ nke imezi ikike.
3.5 Nkwenye nyocha
Akụkụ dị n'ihu bụ usoro nhazi nke ngwaọrụ ịgbado ọkụ niile. Mgbe emechara ya, a na-azụta ihe ndị ahụ dịka nkwụsị nke ihe enyere site na imepụta ahụ, wee nyefee ya na nrụpụta. A na-eme ugboro ugboro na nyocha nke modal mgbe emechara ihe, na usoro nnwale a na-eji eme ihe bụ usoro nyocha sniper kachasị dị mfe ma dị irè. Ebe ọ bụ na ndetu kachasị echegbu onwe ya bụ usoro modal axial nke mbụ, a na-agbakwunye ihe mmetụta osooso na arụ ọrụ ahụ, a na-akụkwa ngwụcha nke ọzọ n'akụkụ ụzọ axial, a ga-enwetakwa usoro nke akụrụngwa site na nyocha. Nsonaazụ ntule nke imewe ahụ bụ 14925 Hz, nsonaazụ nnwale ahụ bụ 14954 Hz, mkpebi ntụgharị bụ 16 Hz, na njehie kachasị erughị 1%. Enwere ike ịhụ na izi ezi nke ịmecha ihe mmechi na ngụkọta modal dị oke elu.
Mgbe ị gafere ule nnwale ahụ, a na-etinye ngwa ọrụ na mmepụta na mgbakọ na igwe na-ekpo ọkụ ultrasonic. Ọnọdụ mmeghachi omume dị mma. Ọrụ a kwụsiri ike ruo ihe karịrị ọkara afọ, na ọnụego ịgbado ọkụ dị elu, nke gafere ọrụ ndụ ọnwa atọ nke onye nrụpụta ngwa ọrụ niile kwere. Nke a na-egosi na imepụta ihe na-aga nke ọma, na usoro nrụpụta agbanwebeghị ugboro ugboro ma gbanwee, na-echekwa oge na ndị ọrụ mmadụ.
Akwụkwọ a na-amalite site na ụkpụrụ nke ultrasonic plastic ịgbado ọkụ, miri grasps na teknuzu na-elekwasị anya nke ịgbado ọkụ, na obụp ke imewe echiche nke ọhụrụ tooling. Jirizie ọrụ nkedo dị ike nke njedebe iji nyochaa imewe ahụ n'ụzọ doro anya, ma webata echiche atụmatụ 6-Sigma nke DFSS, ma na-achịkwa ihe ndị dị mkpa dị mkpa site na ANSYS DOE na-eme nchọpụta nyocha na nyocha nke PDS iji nweta atụmatụ siri ike. N'ikpeazụ, e mepụtara ngwa ọrụ ahụ otu oge, ihe atumatu a gosipụtara nke ọma site na nnwale nnwale ugboro ugboro na nnwalepụta mmepụta n'ezie. Ọ na-egosipụtakwa na usoro nhazi a ga-ekwe omume ma dị irè.